Casharkii 22 aad Habka Cilmi-Baarista ee Research Method · Jowhar.com Somali News Leader
by hanad | Tuesday, Dec 15, 2015 | 5400 views
Ururinta Daraarsada (Organization of the study) Sida ka muuqato erayga, ururka daraasada (Organization of the study) waxaa looga gol leeyahay in qoraaga cilmi-baarista uu ku soo ururiyo qormo kooban, dhaman cutubyada cilmi-baarista, waa in ururka daarasada ugu badnaan ahaado hal bog (one page).
Ururka daraasada waxaa uu qeexaa sida ay daraasada iskugu xirantahay iyo waxa ugu muhiimsan ee cutub waliba diirada lagu saarayo ama lagu saaray. Tani waxay shabahdaa (contents) waase ka yara duwan tahay. Tusaale, marka la qoraayo ururka daraasada lama shegayo tirada boga (page number) halka contents ka la sheego boga tiradiisa.
Ma jirto hal nuuc oo la isku wada raacsan yahay ee looqor ururka daraasada, (Organization of the study) waxaase inta badan loo qoraa labo nuuc midkood. Waxaa loo qori karaa sidii tuduc (Passage) waxaana ku idil dhamaan cutubyada daraasada ay ka koobantahay oo sikooban loo qeexay. Waxaa kale oo loo sameyn karaa sidii shax (chart) leh falaaro iyo sanduuqyo tilmaamayo sida ay iskugu xiranyihiin cutubyada. Muhiimada ay leedahay in la qoro ururka daraasada, ayaa waxay ay tahay, in loo sheego akhristaha cutubka waliba waxa uu dirada saaraayo, cinwaanada ugu muhiimsan iyo sida ay isku xiranyihiin dhamaan cutub yada.
Waxaa in la xuso mudan in inta badan, buuga qalin jabinta uu ka kooban yahay 5 cutub ama chapter, mar mar waxaa dhacdo in buugagta qaar lagu daro mid dheeri ah oo laga dhigo 6 cutub. Marka akhristaha uu aqriyo ururka cilmi-baarista, waxaa uu ogaan karaa dhamaan cutubyada daraasada iyo waxa ku jiro intaba. Ogow ururka daraasada, waxay ay ka mid tahay meelaha ay eegaan macalimiinta qiimeeyo buuga qalin jabinta jaamacada, sidaasi darted waa muhiim in ardayga uu ka taxadaro qorista ururka daraasada.
Dhinaca kale, in kasto guud ahaan la isku raacsanayahay nidaamka guud ee cilmi-baarista, hadane waxaa jiro kala aragti duwanaan u dhaxayso cilmi-baarayaasha ku xeel dheer cilmiga. Inta badan waxaa lagu kala aragti duwanadaa halka ku haboon ee cinwanada qaar lagu qoraayo. Waxaa dhacdo in qabiir cilmi-baare uu soo jeediyo in (Conceptual frame work) lagu qoro cutubka kowaad (chapter one), halka mid ama labo ay soo jediyaan in lagu qoro cutubka labaad ama sadaxaad. Si aysan kuu samayn kala rayi duwanaashaha cilmi-baarayaasha, waxaa haboon in ardayga uu raaco habraaca buuga qalin jabinta jaamacada leedahay (format for thesis).
Waxa laga yabaa jaamacado badan oo Somaliya ku yaalo in ay san lahayn buuga habraaca qalin jabinta. In jaamacada la haato buuga habraaca cilmi-baarista, waxaa ay ka caawin kartaa jaamacada, in dhamaan cilmi-baarista ay sameyaan ardayda in ay noqdaan kuwo nidaam isku mid ah loo maray oo waafaqsan nidamka jaamacada u yaal. La’aanta buuga habraaca cilmi-baarista, waxaa uu sababi karaa jahwareer u dhaxeeyo ardayda, macalimiinta iyo waliba maamulka.
Waxaa laga yabaa in maktabada (library) jaamacada laga helo buugaag ardayda midba sida uu doono u qortay, mana ahan nidaam u wanaagsan ardayda, jaamacada iyo waliba dalka Somaliya. Hadaba, hadii ay jiraan jaamacado aanan lahayn buuga habraaca cilmi-baarista, walina danaynaayo in ay helaan (format for thesis) fadlan ila soo xiriira, waan idinka caawindonaa insha allah.
Dr. Shafici Sharif Mohamed
Casharkii 20 aad Habka Cilmi-Baarista ee Research Method